Siyaasadda Khaaska ah | ThatsLuck.com
Macluumaadka ku saabsan ka shaqeynta macluumaadka shaqsiyeed ee goobta Thatsluck.com
Boggan ma ururiyo xogta shakhsiga ah, rkaliya waxay aqbashaa cookies-ka kuwa aan u dhigin biraawsarkooda si ay u curyaamiyaan iyo cinwaanada IP ee kombiyuutarada loo isticmaalo in lagu soo dejiyo barnaamijka.
Tani ficil ahaan waa wax walba, iyadoo la waafajinayo GDPR ee dhaqangalay tan iyo 25/05/2018, macluumaadkan waxaa loo qoray habka ugu fudud ee suurtogalka ah.
Qof kasta oo raba inuu iga caawiyo sidii aan u horumarin lahaa waa la soo dhaweynayaa wuxuuna u qori karaa Luigi TaIamo, oo mas'uul ka ah ka shaqaynta xogta iyo ilaalinta, cinwaanka emaylkan soo socda: adm @thatsluck.com
Kuwa xiiseynaya, sida ay tahay waajib, halkan waxaa ku yaal macluumaad faahfaahsan oo faahfaahsan.
Macluumaadkan waxaa loogu talagalay in lagu ogeysiiyo booqdaha booqashada goobta ThatsLuck.com hababka looga baaraandego xogta shakhsiga ah ee isaga ku saabsan, iyadoo la raacayo Xeerka Sharci-dejinta 196/2003 ("Xeerka Asturnaanta") iyo Xeerka (EU) 2016/679 ("GDPR").
Goobta ThatsLuck.com waxay uruurisaa xogta hagitaanka tirakoobka si ay u ogaato inta booqdayaashu ku dhaafaan bogaggooda iyo cinwaanada IP ee kuwa soo dejista softiweerka, xogtan cidna looma siinayo waxaana loo isticmaalaa oo keliya in lagu hagaajiyo waxyaabaha ku jira goobta.
Ka shaqeynta xogta shakhsiga ah waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo habab elektiroonig ah iyo warbaahinta waqtiga adag ee daruuriga ah si loo gaaro ujeeddooyinka xogta loo soo ururiyay iyo, xaalad kastoo jirta, iyadoo la raacayo mabaadi'da sharciga, saxnaanta, xad-dhaafka iyo ku-habboonaanta sharciga hadda jira.
ThatsLuck.com isticmaali karaa waxa loogu yeero fiilooyinka bulshada. Xayeysiinta bulshada waa qalab gaar ah oo kuu oggolaanaya inaad si toos ah ugu darto howlaha shabakadaha bulshada websaydhka (tusaale ahaan "sida" shaqada Facebook).
Dhammaan qalabka wax lagu rakibo ee goobta ku yaal waxaa lagu calaamadeeyay astaanta u gaarka ah ee ay leedahay barmaamijka tixraaca (tusaale Facebook, Google, Twitter, YouTube, Amazon).
Markaad booqato bog ka mid ah goobta oo aad la fal gasho furitaanka, macluumaadka u dhigma waxaa si toos ah looga gudbiyaa biraawsarka si toos ah barxadda bartilmaameedka oo lagu kaydiyaa.
Macluumaadka ku saabsan ujeeddooyinka, nooca iyo hababka ururinta, ka shaqeynta, isticmaalka iyo keydinta xogta shakhsiga ah ee barxada dibedda, iyo sidoo kale qaababka loo adeegsado xuquuqdaada, fadlan la tasho siyaasadda asturnaanta ee uu qaatay bogga shaqsiyeed.
ThatsLuck.com wuxuu ka kooban yahay xiriiriyeyaal bogagga bannaanka: sida iska cad mas'uuliyad kama saarantahay daaweynta asturnaanta bogaggan.
Mawduucyada ay u gudbiyeen xogta shaqsiyadeed ee kor ku xusan, waxay xaq u leeyihiin inay ku dhaqmaan xuquuqdooda si waafaqsan iyo xadka ay dejisay sharciga gaarka ah ee hadda jira waxayna xaq u leeyihiin inay codsadaan:
marin u helid (waxay codsan karaan xaqiijin ah in xogta iyaga khuseysa iyo in kale la sii wado, iyo sidoo kale sharraxaad dheeri ah oo ku saabsan macluumaadka ku xusan Ogeysiiskan, iyo sidoo kale inay helaan xogta, illaa xad xaddiga macquulnimada);
sixitaan (waxay codsan karaan inay saxaan ama kaabiyaan xogta ay na siiyeen ama xaalad kastoo aan haysano, haddii ay khalad tahay);
baajinta (waxay codsan karaan in xogta la helay ama laga shaqeeyay goobta laga tirtiro);
mucaaradka (way diidi karaan ka shaqeynta xogtooda waqti kasta);
la qaadi karo (waxay codsan karaan inay helaan xogtooda, ama inay u gudbiyaan milkiile kale oo ay ku tilmaameen, qaab qaabaysan, oo badanaa loo isticmaalo loona akhrin karo aalad otomaatig ah). Intaa waxaa sii dheer, iyadoo la raacayo farshaxanka. 7, faq. 3, GDPR, xaq u lahaanshaha ka noqoshada ogolaanshaha waa la isticmaali karaa wakhti kasta, iyada oo aan loo aabo yeelin sharci ahaanta daaweynta ee ku saleysan ogolaanshaha horey loo siiyay.
Ugu dambeyntiina, dadka soo booqda waxay xaq u leeyihiin inay dacwad ka gudbiyaan Hay'adda Kormeerka, oo Talyaanigu damaanad ka qaato ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah.
Haddii martidu ogaadaan inay wax qaldan yihiin, hase yeeshe, way u digi karaan kantaroolaha isaguna wuxuu qaadi doonaa tallaabada ku habboon sida ugu dhakhsaha badan.
Suuragalnimada gelitaanka dhaqan galka qawaaniinta cusub ee waaxda, iyo sidoo kale baaritaanka joogtada ah iyo cusbooneysiinta adeegyada isticmaalaha, waxay horseedi kartaa baahida loo qabo in wax laga beddelo qaababka iyo ereyada lagu qeexay Ogeysiiskan.
Sidaas awgeed waa suurtagal in dukumiintigaan isbeddel ku yimaado waqti ka dib.
Waxaan ku daabici doonnaa boggan wixii isbeddel ah ee Ogaysiiskan ah, haddii ay khuseeyaan, waxaan kugula socodsiin doonnaa ogeysiis muuqda.
Noocyadii hore ee macluumaadkan, si kastaba xaalku ha ahaadee, waa la keydin karaa si loo oggolaado la-tashi.
Sidoo kale akhri ► siyaasadda cookie